चिया : सेतो पिउने कि कालो ? « Sadhana
चिया : सेतो पिउने कि कालो ?
डा. प्रकाशराज रेग्मी, मुटुरोग विशेषज्ञ ।
दूध, चिनी हाली आगोमा भकभकी उमालेर पकाएको चिया धेरैको रोजाइमा पर्छ । किनकि यो हामीलाई स्वादिलो लाग्छ । तर स्वास्थ्यका जानकारहरुले यस्तो चियाले स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ भनी खबरदारी गर्छन् । यस्तो खबरदारीलाई ध्यानमा राखेर केही मान्छेले चियामा दूध–चिनी केही पनि नमिसाई कालो चिया पिउने गर्छन् । कतिले त स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ भनेर हरियो चिया मीठो नलागे पनि पिउने गर्छन् । स्वास्थ्यका हिसाबले चिया सेतो, कालो या हरियो कुन फाइदाजनक छ भन्ने बारे धेरैलाई जान्ने उत्सुकता छ । हामीले दिनदिनै २–४ कप चिया पिएकै हुन्छौं । यसबारे कुन राम्रो, कुन नराम्रो भन्ने जानकारी लिनु सबैका लागि उपयोगी हुन्छ ।
हरियो र कालो दुवै चिया एउटै जातको क्यामेलिया नामक वनस्पतिबाट उत्पादन हुने गर्छ । चिया बगानबाट चियापत्ती टिप्दा त्यो हरियो हुन्छ अनि त्यसलाई प्रशोधन गरेपछि त्यो कालो हुन्छ । हरियो चिया भनेको सबैभन्दा कम प्रशोधित चिया हो । चियाको पातलाई जति धेरै प्रशोधन गरिन्छ त्यति नै मात्रामा त्यसमा भएका गुणकारी तत्वहरु नष्ट हुँदै जान्छन् । यो हिसाबले कालोभन्दा हरियो चियालाई बढी स्वास्थ्यबद्र्धक मान्नुपर्छ । हरियो चियामा स्वास्थ्यवद्र्धक तत्व पोलिफिनोल र क्याटेखिन बढी पाइन्छ भने कालो चियामा यिनीहरुको मात्रा अलि कम हुन्छ तर क्याफिनको मात्रा बढी हुन्छ । क्याफिनले शरीरलाई उत्तेजित पार्ने, नशा लाग्ने कारणले त्यति राम्रो मानिदैन ।
चियालाई धेरैबेर उमाल्यो, त्यसमा दूध र चिनी मिसायो भने पोलिफिनोल, क्याटेखिन आदि गुणकारी तत्वहरु निष्क्रिय भैदिन्छन् । यसकारण स्वास्थ्यका हिसाबले सोझो अर्थमा चिया कालोभन्दा हरियो राम्रो, दूध–चिनी हालेको भन्दा नहालेको राम्रो । यो विज्ञानले बोलेको कुरो हो । तर मेरो विचार बेग्लै छ । मलाई लाग्छ, दूध–चिनी हालेर मज्जाले पकाएको १–२ कप मीठो चिया पिउँदैमा स्वास्थ्यलाई खासै केही नकारात्मक असर पर्दैन । झन् उल्टो आनन्द आउँछ, चियाको मिठासमा मान्छे रमाउँछ र यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्छ ।
हामीले पोलिफिनोल एन्टिअक्सिडेन्ट चियाबाटै किन लिनुपर्‍यो । फलफूल, सागसब्जी, गेडागुडी, ड्राइफ्रुट्स आदिबाट प्रशस्त फाइबर र एन्टिअक्सिडेन्ट पाउन सक्छौं । यी चिजहरु खाए भैहाल्यो नि ∕ चियाको स्वाद बिगारी–बिगारी टर्रो चिया नै किन पिउनुपर्‍यो ∕ कोक, फान्टा, स्प्राइट, रेडबुलजस्ता पेयपदार्थहरु पिउनुभन्दा आगोमा भकभकी उमालेको दूध, चिनी हालेको चिया नै बढी फाइदाजनक हुन्छ । यस्तो चिया दैनिक १–२ कप पिउँदा केही पनि हानि छैन । तर जसले दैनिक २ कपभन्दा बढी चिया पिउँछ उसले विचार पुर्‍याउनुपर्छ– कस्तो चिया पिउने रु कति कप पिउने रु कुन बेला पिउने रु चिनी–दूध हाल्ने कि नहाल्ने रु आदि । यससम्बन्धमा मेरो अवधारणा यस प्रकार छ :
२. पेटको समस्या छ, पेट फुल्छ, पोल्छ, ग्यास्ट्रिक बढ्ने समस्या छ, डकार धेरै आउँछ, अमिल्युकी आउँछ भने चियामा दूध नहालेको राम्रो । यस्तो समस्या भएकाहरुले दूधविनाको कालो या हरियो चिया पिउँदा राम्रो हुन्छ । तर तपाईं चियाको असाध्यै पारखी हुनुहुन्छ, सेतो दूध हालेको चिया मन पराउनुहुन्छ भने खालि पेटमा नपिउनुहोस् । पहिले अलिकति पानी पिउनुहोस् अनि दूध हालेको चिया पिउनुहोस्, दैनिक १ कपभन्दा बढी सेतो चिया नपिउनुहोस् । कालो चियामा अदुवा मिसाएर पकायो भने स्वाद पनि बढ्छ, पेटलाई फाइदा पनि हुन्छ ।